China ọla ọla ntụpọ ịgbado ọkụ igwe Manufacturer na Supplier | Anyanwu
Eriri Laser tingcha Machines
Single Isiokwu Series
Ejiri Igwe Na-agbanwe Agbanwe Agbanwe
Obere Cutcha Size Series
Mpempe akwụkwọ Metal Ma Tubes Laser tingcha Machine
Laser Tubes tingcha Machine
Automatic Laser tingcha Machine
Automatic Laser tube tingcha Machine
Dual Exchange Platform enweghị nchọ
Dual Exchange Platform na Cutcha tube
Eriri Laser akara Machine
Portable Mini Fiber Laser akara Machine
Portable nchọ Fiber Laser akara Machine
Ft Type Full nchọ Fiber Laser akara Machine
Mini Smart Fiber Laser akara Machine
Cabinet Type Fiber Laser akara Machine
Iberibe Fiber Laser akara Machine
UV Laser akara Machine
CO2 Laser akara Machine
3D CO2 Laser akara Machine
Ahaziri Laser akara Machine
3D Fiber Laser akara Machine
Laser ịgbado ọkụ Machines
Automatic Laser ịgbado ọkụ Machines
Hand-ejide Laser ịgbado ọkụ Machines
3D Laser ịgbado ọkụ Machines
Ọla Laser Abù ịgbado ọkụ Machine
CO2 Laser tingcha Ma osise Machine
3D Crystal Laser Ne Ne osise Machine
Obere Size Crystal Laser Ne osise Machine
Big Size Glass Laser Ne osise Machine
Igwe nhicha Laser
Laser Consumables Ma Ngwa
Eriri Laser Generator
Isi Mgbube Laser
Laser Cutting nozulu
Lens Nchedo Anya
Laser tingcha Efere Mgbaaka
YAG Laser Xenon-Oriọna
Collimating Lens N'ihi Fiber Laser tingcha Machine
Ilekwasị Anya maka Anya Fiber Laser Cutting Machine
Laser akara Control Card
Eriri Laser tingcha Control Kaadị
Laser tingcha Head njikọ
Isi nyocha Laser
Eriri Laser Generator N'ihi Laser akara (RAYCUS)
Ọla laser ntụpọ ịgbado ọkụ igwe
Ọla ntụpọ laser ịgbado ọkụ igwe iwebata:
Nke a igwe na-akpan mere maka ọla na ndị ọzọ obere metal ngwaahịa ntụpọ laser ịgbado ọkụ, tumadi na-eji na ntụpọ ịgbado ọkụ nke dị iche iche ọla.
Laser ntụpọ ịgbado ọkụ bụ akụkụ dị mkpa nke laser ihe onwunwe nhazi technology, otu n'ime ntụpọ-ịgbado ọkụ usoro bụ thermal conduction, ntụgharị laser radieshon kpo oku elu, elu okpomọkụ na esịtidem mgbasa site okpomọkụ omume, site ịchịkwa obosara nke laser usu, ike, ike kachasị elu na ugboro ole na ole, oke dị ka agbaze nke mmiri, iji mepụta ọdọ mmiri a wụrụ awụ.
N'ihi uru ya pụrụ iche, ejirila ya nke ọma na nhazi ọla na ọla ọcha na ịgbado ọkụ nke obere na akụkụ micro.
Workingkpụrụ ọrụ nke usoro ịgbado ọkụ laser bụ teknụzụ ịgbado ọkụ na ike ọkụ dị elu na ebe a na-ahụkarị, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ịgbado ọkụ na ịrụzi obere akụkụ niile, ma mejupụta ụkọ nke usoro teknụzụ argon arc na ịgbado ọkụ na elu ịgbado ọkụ.
A na-ezere ọnụ ụzọ ụzọ abụọ nke nrụgide ọkụ na ọgwụgwọ, nke na-azọpụta usoro mmepụta nke ebu.
Laser ntụpọ welder na-bụ-eji maka oghere ndochi na ntụpọ ịgbado ọkụ nke ọlaedo na ọlaọcha ịchọ mma, na nwekwara ike-eji maka oyi ịgbado ọkụ nke elu alloy ígwè, na-ekpo ọkụ ibe ya bụrụ elu alloy ígwè, nickel ngwá ọrụ ígwè, elu ọkwa ígwè, ọla kọpa alloy, beryllium ọla kọpa , akwa siri ike nke alloy alloy, ọla edo, ọlaọcha na ihe ndị ọzọ dị na ígwè.
SUNTOP ọla ọla laser ịgbado ọkụ igwe isi atụmatụ:
Enwere ike itinye igwe niile na desktọọpụ, ihe eji eme ka mmiri dị jụụ, obere oghere.
Energy, usu obosara, ugboro, ntụpọ size nwere ike gbanwee na a nnukwu nso, iji nweta a dịgasị iche iche nke ịgbado ọkụ mmetụta.
A na-agbanwe ihe ndị ahụ site na mkpanaka nchịkwa na oghere mechiri emechi, nke dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ojiji nke oghere seramiiki nke Britain batara, mbibi nrụrụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, arụmọrụ mgbanwe fotoelectric dị elu, na-etinye ndụ oghere (afọ 8-10), ndụ oriọna xenon karịa oge 8.
Ngwunye kwekọrọ, kpochapụ ihe na-akpali akpali n'anya n'oge ọrụ.
Na 24 awa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ike, dum igwe arụmọrụ bụ mụ.
Humanized imewe, ergonomic, ogologo ọrụ awa na-enweghị ike ọgwụgwụ.
Isi uru: ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị elu, nnukwu omimi, obere nrụrụ, obere ọkụ metụtara mpaghara, ogo ọkụ dị elu, enweghị mmetọ, arụmọrụ dị elu na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Isi parameters nke ọla ntụpọ laser ịgbado ọkụ igwe:
Max. ike laser 150W
Ogologo laser 1064nm
Ike oriri niile 5KW
Laser na-elekwasị anya 110mm
Laser usu ugboro ugboro ≤0.1-20Hz
Mmiri TM Nchedo 10-30 ogo
Laser usu obosara Ms20ms
Gas nchedo laser 1 ụzọ
Ịnye ọkụ 220V / 50Hz / 20A
Akụkụ 900 * 500 * 600mm
Net arọ nke igwe 80KG
The ezigbo ọla laser ịgbado ọkụ sample foto maka akwụkwọ:
Nke gara aga: Hand ẹkenịmde eriri laser ịgbado ọkụ igwe
Osote: CO2 laser ọnwụ na osise igwe
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ-Sitemap-AMP Ekwentị
Pipe Fiber Laser cutter, Eriri Laser tingcha Machine, Tube Laser cutter, Eriri Laser tube tingcha Machine, China Fiber Laser tingcha Machine, Eriri Laser Pipe tingcha Machine,